भैरहवामा २६ वटा उद्योग स्थापना गर्न अनुमति » खबरहरुको एउटै केन्द्र
भैरहवामा २६ वटा उद्योग स्थापना गर्न अनुमति
सोमबार, असार ४, २०७५ १६:०८ मा प्रकाशित !
काठमाडौं। सरकारले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २६ वटा उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २६ वटा उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दिइएको जानकारी दिएका हुन्।
उनले अनुमति पाएका सबै उद्योगहरुलाई एक हप्ता भित्र उद्योग दर्ता र २ हप्ता भित्रबाट उद्योग निर्माणको काम सुरु गरिसक्ने गरी उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दिइएको जानकारी दिए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टले एक वर्ष भित्र स्थापना गरिएको उद्योगबाट उत्पादन सुरु हुने गरी कामलाई अघि बढाउने जनाए। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ८ अरव बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट तत्कालका लागि ५ हजार २ सय रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक भट्टले उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पनि दूू्रत गतिका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी, व्यवसायीहरुले भने भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा फूड र प्लाष्टिक उद्योग स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अन्य ठूला उद्योग स्थापनाका लागि ठाउँको समेत अभाव हुने भएकाले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा फुड र प्लाष्टिकको उद्योग स्थापनाका लागि उपयुक्त हुने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष डा. हरिभक्त शर्माले सरकारलाई सुझाव दिए। उनले ठूला उद्योग स्थापनाका लागि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कामलाई बढावा दिन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदिपकुमार श्रेष्ठले उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए। उनले उद्योग स्थापनाका लागि अव विद्युतको अभाव नहुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले पूर्वाधारको अभावमा नेपालको उद्योग, व्यवसाय फष्टाउन नसकेको पनि बताए।
PREVIOUS POST Previous post: नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गर्ने तयारी
NEXT POST Next post: काँग्रेस तत्काल महाधिवेशनमा जानुपर्छ : नेत्री कोइराला
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, असार ४, २०७५ १६:०८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, असार ४, २०७५ १६:०८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, असार ४, २०७५ १६:०८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, असार ४, २०७५ १६:०८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, असार ४, २०७५ १६:०८